समाचार - फ्रेन्च ग्लास बाउलको साथ स्टीम ओभन "सी से xing you" (राम्रो चीजहरू मन पराउनु स्वाभाविकै हो, खाना हो), खानाको प्रेम सुरूदेखि नै मानिसजातिको अन्त्यको खोजी हो।
फ्रेन्च ग्लास बाउलको साथ स्टीम ओभन "सी से xing you" (राम्रो चीजहरू मन पराउनु स्वाभाविकै हो, खाना हो), खानाको प्रेम सुरूदेखि नै मानिसजातिको अन्त्यको खोजी हो।
फ्रेन्च ग्लास बाउलको साथ स्टीम ओभन "सी से xing you" (राम्रो चीजहरू मन पराउनु स्वाभाविकै हो, खाना हो), खानाको प्रेम सुरूदेखि नै मानिसजातिको अन्त्यको खोजी हो। आज जब जीवन प्रशस्त हुँदै गइरहेको छ, मान्छेहरूको खाना, लुगाफाटा, र खानामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। खानाका प्रकारहरू निरन्तर समृद्ध हुन्छन्। विभिन्न खाना पकाउने प्रविधिहरू गउरमेन्ट पकाउनको क्रममा थपिएको छ, यसले व्यक्तिको स्वाद कलियोंमा थप उपन्यास अनुभवहरू ल्याउँदछ।
यद्यपि आधुनिक व्यक्तिहरू अन्धाधुन्ध भएर स्वादिलोपनको खोजीमा, धेरै पकाउने खाना पकाउने प्रक्रियामा थपिन्छन्। तथ्या .्कका अनुसार चिनियाँहरूले दिनको औसत 42२.१g तेल खान्छन्, स्वास्थ्य स्तरको भन्दा दोब्बर।
उच्च-फ्याट खाना कत्तिको हानिकारक छ?
अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल र बोसो रक्त वाहिकाको भित्तामा जम्मा हुनेछ, धमनीकोशिकरण हो, मस्तिष्कको कार्यप्रणालीलाई असर गर्ने, हृदय रोग, कोरोनरी हृदय रोग र अन्य रोगहरूको घटना बढाउने, र यो भन्दा बढि, शरीरको क्यान्सरको सम्भावना बढाउने। खाना र स्वास्थ्य निराश हुन सक्दैन। यस समस्याको समाधानका लागि, शाओ हONG्गले बौद्धिक प्रकाश वेभ ओभनहरूको श्रृंखला सुरू गर्यो। ओभनको श्रृंखला बेकि,, बेकि,, बेकिंग, तताउने, पगाल्ने, सफा गर्ने र अन्य कार्यहरू समग्रमा भान्साको दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न समाहित गर्दछ।
बेकिंग ओभनको आधारभूत गौण, कम ग्रिल कुखुराको पखेटा, कुखुराको खुट्टा, भेडा चप्पल, माछा र अन्य मासु ग्रिलिंगको लागि उपयुक्त छ। इन्फ्रारेड लाइट वेभ high 360० उच्च-स्पीड, आँधीबेहरी रोस्ट मासुको खाना, अधिक चर्कोको लागि जबरजस्ती, मासु क्रिष्ट, स्वादिष्ट र चिल्लो हुँदैन। बेक्ड पिज्जा, अण्डाको डण्डाहरू, फ्रेन्च फ्राइज, मीठा आलु र अन्य लोकप्रिय स्नैक्स, कम शेल्फ पनि एक आवश्यकता हो। उच्च ग्रिल एक "उचाइ रिंग" सँग मिल्दछ केही ठूला खानाहरू बनाउन, जस्तै भुनीको पूरै कुखुरा।
द्रुत अपरेशन, उच्च गुण, द्रुत कुकिंग गति।
SHOO हाँग भट्टीमा कुखुरा पकाउन केवल minutes० मिनेट मात्र लाग्छ, र स्वाद सम्झौता गरिएको छैन। इन्फ्रारेड लाइट वेभ प्रयोग गरी-360० डिग्री उच्च गतिको आँधीबेहरीलाई खाना पकाउन, छिटो, कुशल, र मासु फूड ग्रीसलाई बाहिर निकाल्न सक्दछ, यो वास्तवमै प्रत्येक परिवारको लागि भान्साकोठाको उपकरण हो।
शाओ हONG बेकिंग ओभन, जसलाई "एयर फ्रियर" पनि भनिन्छ, बजारमा केही एयर फ्रायर लेपित मेटल प्यान प्रयोग गर्दछ, यो उच्च तापमानमा विषाक्त पदार्थहरूको वर्षा गर्न सजिलो छ, जसले शरीरलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ। SHAO हंग ओभनले पूर्ण पारदर्शी टेम्पर्ड ग्लास शीर्ष कभर प्रयोग गर्दछ। उच्च-अन्त श्रृंखलामा प्रयोग गरिएको बेकि pan प्यान फ्रान्सबाट आयात गरिएको गिलास प्यान हो, र योसँग विशेष विश्वव्यापी बिक्री अधिकार छ; मध्य-अन्त श्रृंखलाको बेकि pan प्यान पनि घरेलु ए-ग्रेड सामग्रीबाट बनेको छ।
SHAO हौं ओभनको अपरेशन मोड पनि विविध छ। मेकानिकल अपरेशन प्यानल वृद्धहरूका लागि उपयुक्त छ, र एक-कुञ्जी स्मार्ट प्रकार आलसी व्यक्ति वा खाना पकाउनेहरूका लागि उपयुक्त छ। त्यहाँ एक श्रृंखला पनि छ, जुन खाना सर्तहरू अनुसार "समय, तापक्रम, हावाको वेग" सेट गर्ने हो। यो व्यक्ति खाना पकाउन मन पराउँदछ र खाना पकाउन मा कुशल छ। यद्यपि, शाओ ह्गसँग उपलब्ध व्यञ्जनहरू छन्, व्यक्तिगत बानीको अनुसार छनौट गर्नुहोस्। फरक पर्दैन कि कुन शैली बिक्री पछि चिन्ता-मुक्त छ!
प्राय: यो भनिन्छ कि संसारमा सौन्दर्य खाना खिन्न हुन सक्दैन। जबकि आधुनिक मानवहरूले निर्बाध रूपमा स्वादिष्ट पकवानहरू पछ्याइरहेका छन्, तिनीहरू स्वास्थ्य संरक्षणमा पनि बढी ध्यान दिन्छन्। SHAO ह scientific्ग वैज्ञानिक अनुसंधान टोली "एक उच्च गुणवत्ता र स्वस्थ जीवन प्रदान" को अवधारणाको पालना गर्दछ र उत्पाद नवीनता को बाटो मा विकास गर्न जारी छ। स्वस्थ गुणवत्तायुक्त खाना द्वारा ल्याइएको नयाँ जीवन अनुभवको आनन्द लिन तपाईंको फुर्सतको समय प्रयोग गर्नुहोस्।